एनआरएनए पोर्चुगल : अध्यक्षको सम्मान मोह, नियमित बैठक रद्ध गरेर सम्मान थाप्न पुगे पदाधिकारीहरु - VOICE OF NEPAL
२२ भाद्र २०७६, आईतवार १०:०४
गैह्र आवसिय नेपाली संघ पोर्चुगलको अघिल्लो आइतवार हुने भनिएको नयाँ कार्यसमितिको दोश्रो नियमित बैठक बस्न सकेन। नवनिर्वाचित अध्यक्ष तिलक गैरे र उनको समुह यतिबेला काम गर्नुभन्दा पनि सम्मान ग्रहण गर्नमा व्यस्त छ। अध्यक्ष गैरे यतिबेला सामाजिक अभियन्ता भन्दा पनि नेताका रुपमा दौडधुप गरिरहेका छन्, बिजयोत्सव मनाउन व्यस्त छन्।
संघको आधिकारिक फेसबुक पेजमा अध्यक्ष गैरे र महासचिव हेमराज सुबेदीद्वारा जारी गरिएको सुचनामा भनिएको छ ” क्षेत्रीय समितिहरुले स्वागत , सम्मान र परिचयात्मक साथै मतदाताहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम समेत राखेको र केन्द्रलाई अनिवार्य उपस्थिति हुन पत्राचार भएकोले संघको नियमित बैठक रद्ध गर्दै एक साताको लागि सारिएको छ। ” यो सूचना प्रकाशित गरेको केही मिनेटमै फेरी संघको आधिकारिक पेजबाट हटाईएको छ।
संघका अध्यक्षको काम नियमित बैठक रद्ध गर्दै सम्मान थाप्ने कि संघको कामकारवाही अगाडी बढाउने ? के क्षेत्रीय समितिहरुले केन्द्रको नियमित बैठक नै रद्ध हुनेगरी अनिवार्य उपस्थिति हुन पत्राचार गर्न मिल्छ ? नवनिर्वाचित अध्यक्ष गैरे र उनको कार्यसमिति पोर्चुगलको तिस हजार जनसंख्या भनिएको नेपालीहरुको मालिक हुन् कि सेवक ? त्यसैपनि अध्यक्ष गैरेलाई निर्वाचनमा धाधली गरेको आरोप लाग्दै आएको छ , उनको कार्यक्षेत्र कृषिको अलेन्तेजोको निर्वाचन क्षेत्रबाट उनको नाममा दुई तिहाईभन्दा बढी मत एकछापे खसेसंगै निर्वाचनमा धादली भएको स्पष्ट हुन्छ। के गैरे अलेन्तेजो क्षेत्रमा त्यति धेरै लोकप्रिय छन् कि त्यस क्षेत्रमा अरु कुनै पनि उम्मेदवारहरुलाई मतदाताहरु हेर्न नै चाहदैनन् ? के गैरे कृषि र अलेन्तेजो क्षेत्रका ” सिंघम” नै हुन् ?
नियमित बैठक रद्ध गरेर सम्मान ग्रहण गर्नु नियमसंगत थियो भने किन सूचना प्रकाशित गरिएको केही मिनेटमै फेरी हटाईयो ? किन सधै हचुवाको भरमा निर्णय गर्छ संघ ? संघ जनउत्तरदायी र जनमुखी कहिले हुने ? किन अध्यक्ष र उनका पदाधिकारीहरु आफ्नै क्रियाकालापले सधै संघलाई बिबादमा तानिरहन्छन् ? ३० हजार जनसंख्या भनेर गर्व गर्ने समाजका दुई हजारको हाराहारीमा मात्रै सदस्य छन् , आम सर्वसाधारण नेपालीहरुले कहिले संघप्रति अपनत्व महशुस गर्ने ? यी र यस्तै यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर यो समाज र यही समाज हाक्ने ठेक्का लिएका ठेकेदारहरुले खोज्नु जरुरी छ।
एउटाको बिजय र अर्को पराजयमा जनभावनालाई कुल्चिदै समाजलाई उपेक्षित गर्ने र समाज विखण्डन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, र हुनुपनि हुदैन। सम्मान ग्रहण गर्न रद्ध भएको संघको दोश्रो नियमित बैठक आज बस्दै छ।